Joany 11 - Ny Baiboly
Joany toko 11
33Nony nahita azy nitomany Jesoa sy ireto Jody niara-nitomany taminy koa, dia nandevy ny fony ary nientana iray ihany ny tenany rehetra. 34Aiza no nandevenanareo azy, hoy izy? Dia hoy ireo taminy: Andeha hianao hizaha, Tompoko. 35Ary nitomany Jesoa. 36Dia hoy ny Jody: Akory ity haben'ny fitiavany azy! 37Fa hoy kosa ny sasany tamin'izy ireo: Tsy azony natao va re ny nisakana an-dralehilahy ity tsy ho faty, nefa ny mason'ilay teraka jamba nampahiratiny? 38Dia niontana indray ny fon'i Jesoa, ary lasa izy nankeo amin'ny fasana, izay zohy norakofana vato. 39Esory ny vato, hoy izy. Ka hoy Marta anabavin'ny maty taminy: Efa maimbo izy, Tompoko, fa efa hefarana izay. 40Ary hoy Jesoa taminy: Tsy efa voalazako taminao va fa raha mino hianao, dia hahita ny voninahitr'Andriamanitra? 41Dia nesorina ny vato, ka niandrandra Jesoa sy nanao hoe: Misaotra anao aho, Raiko, satria efa nihaino ahy hianao. 42Raha izaho, dia fantatro fa mihaino ahy mandrakariva hianao; fa noho ireto vahoaka manodidina ahy kosa no nilazako izany, mba hinoany fa hianao no naniraka ahy. 43Rahefa nilaza izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe: Mivoaha,ry Lazara. 44Ka niaraka tamin'izay dia nivoaka ny maty, ny tongotra aman-tànany nisy fehim-paty, ary ny tavany nisarona lamba. Dia hoy Jesoa tamin'ny olona: Vahao izy ka avelao handeha. 45Ary maro tamin'ny Jody izay tonga tao amin'i Maria sy Marta sy nahita ny nataon'i Jesoa no nino azy.
46Fa ny sasany tamin'izy ireo kosa dia lasa nankany amin'ny Farisiana, ka nilaza taminy izay nataon'i Jesoa. 47Dia namory ny mpanolo-tsaina ny lehiben'ny mpisorona sy ny Farisiana ka nanao hoe: Inona ity ataontsika, fa manao fahagagana maro iny Lehilahy iny? 48Raha avelantsika hanao ihany izy, dia hino azy ny olona rehetra, ka ho avy ny Romana dia haka ny tanànantsika sy ny firenentsika. 49Dia hoy ny anankiray tamin'izy ireo atao hoe Kaifa, izay lehiben'ny mpisorona tamin'izany taona izany: Tsy mahalala na inona na inona hianareo, 50na tsy mihevitra akory fa tsara ho anareo raha maty ho an'ny vahoaka ny lehilahy anankiray, mba tsy ho rava ny firenena manontolo. 51Tsy avy aminy anefa no nitenenany an'izany, fa noho izy lehiben'ny mpisorona tamin'izay taona izay, dia naminany izy fa ho faty ho an'ny firenena Jesoa, 52ary tsy ho an'ny firenena ihany, fa mba hamory ny zanak'Andriamanitra izay efa niely koa ho antokony iray. 53Hatramin'izany andro izany dia nikendry izay hahafaty azy izy ireo.
54Koa tsy nandeha am-pahibemaso tany amin'ny Jody intsony Jesoa, fa niala teo nankany amin'ny tany akaikin'ny efitra, ho any an-tanàna atao hoe Efrema, dia nitoetra tany izy mbamin'ny mpianany. 55Efa akaiky ny Pakan'ny Jody tamin'izay ka maro ny olona avy tamin'izany tany izany no niakatra tany Jerosalema alohan'ny Paka, mba handio tena. 56Dia nitady an'i Jesoa izy ireo ka nifampilaza tao anatin'ny tempoly hoe: Ahoana no hevitrareo, dia tsy ho avy hamonjy ny fety ve izy? Ny lehiben'ny mpisorona sy ny Farisiana tamin'izany efa nandidy fa izay mahita ny itoerany dia tsy maintsy milaza, mba hisamborana azy. >